Hevitra MPANOHARIANA | Andavanandro | 6
Sarin'ny Faran'ny 2011 sy Voalohan'ny Taona 2012
2012-01-01 @ 18:40 in Andavanandro
Amin'ny alalan'ny sary isan-karazany nalaina teto Antananarivo, izay nandalovana no iarahabako anareo nahatratra ny taona vaovao 2012. Ho taom-pahombiazana ho an'ny tsirairay anie ity taona vaovao migadona ity ary samy ho ambinina tamin'izay nisasarany avy.
Mba ho lalan'ny mpandeha an-tongotra hatrany anie no andehanan'ny mpandeha an-tongotra. Dia tsy ho zatra handeha an-tongotra eny an'arabe ny olona.
Indraindray vokin'ny ody ambava-fo ny olona rehefa mihinana ka ny tena sakafo indray no tsy lany intsony. Toy izao moa ny hita nandritra ity vanim-potoana ity.
Alarobia maraina dia maraina mialoha ny amin'ny fito ora, feno olona sahady Andravoahangy... tsia...efa hody ary ny mpivarotra raha ny tokony ho izy. Nikatso sahady ny fifamoivoizana.
Hisisika hiditra anaty fitohanana ihany koa izay kamiao izany. Voasakany ny zotra tokony hankaty Masikara.
Eto no ahitantsika ireo fiara tsy afa-mandroso, ny mpivarotra anaty arabe noho ilay tsenan'ny tantsaha...
Eo anoloan'ny fiantsonan'ny fiara fitateran'olona eo Andravoahangy. Mpivarotra, mpandeha an-tongotra, moto, sarety... Hita avokoa rehefa alarobia tsena ankoatra ny polisy.
Indro tazantsika manangansanga ilay kamiao somary nibahan-dalana tetsy ambony tetsy. Efa somary niverina kely aho rehefa nigadona teo ambany tetezan'i Behoririka, nandeha an-tongotra. Maro ny fiara fitaterana avy any Behoririka no mangalatra mandeha kely miakatra any Tsiazotafo dia midina eo amin'ny Epi d'Or taloha mba hamonjy ny rond point Andravoahangy ka voasongona avokoa ireto fiara hitantsika amin'ny sary ireto.
Tsy ny kamiao ihany no mety hibahan-dalana fa ny andiam-piara maika ihany koa ka manakana ny zotran-dalana tokony hifanena aminy. (Nane Bel'Air)
Fitohanana amin'ny fito ora maraina.
Indraindray tsy afa-manoatra fa manaraka ny dian'ny sarety ny fiara rehetra aorian'izy itony...
Hitantsika ve ny mahasamy hafa ny maraina sy ny atoandro? Ny olona angamba no mihabetsaka dia izay ihany.
Andro vitsivitsy lasa izay nisy zavatra namboarin-dry zalahy ireto ka voatery nolavahiny ny arabe.
Tonga ny faran'ny taona, io sisa no tsy vita tsara fa enga anie ho tototra vita tara sy ho toy ny tsy nisy nangady lavaka teto.
Ireto eto ambony sy ambany ireto dia nalaina ny 2 janoary hanamarinana kokoa sy hanaovana fampitahana ny sary
Ny kely sisa tsy vita no soratako an
Mampiavaka ny tsena Andravoahangy: amin'ny iray ora folakandro dia efa madiodio ny anaty tsena. somary mbola mitohatohana kosa ny ivelan'ny tsena.
Andro alarobia io...
Asabotsy faran'ny taona: vitsy kokoa noho ny Asabotsin'ny noely izay nanapahan'ny mpivarotra ny lalana Ambodifilao-Behoririka ho tsy azon'ny fiara nandehanana intsony. Teto kosa somary nalaladalaka kokoa ny lalana sa ny tsena?
Izay fiara tsy maintsy mandalo ny arabe ihany no tena mizotra eny sisa, ny hafa raha azony atao dia mitady lalankafa.
Ny antsasany na ny roatokon'ny arabe no efa lasan'ny mpivarotra sy ny mpiray tsikombakomba aminy.
Mihafy ny fiara...
Arabe zotra telo, iray sisa no miasa...
Tazanin-davitra sisa ilay petite vitesse nampanantenaina hohalalahana tamin'ny fifidianana Ben'ny Tanàna kanjo natao tsena, nanakanana ny fiara, ankehitriny zotra tokana toy ny teo aloha indray... raha tsy voavaha ny olana eto tsy ho voavaha mihitsy ny fitohanan'ny fifamoivoizana eto Analakely sy ny manodidina.
Fa avy orana hatrany ny 31 desambra sy ny 1 janoary ka nampalalaka ny lalana.
Tsy nanakana izay mba te-hitsangatsana tsy hivoaka izany orana izany.
Vitsy ny fiara niasa ka saiky marobe hatrany ny olona niandry azy teny amin'ny fiantsonana rehetra. Nanao tetika noho izany ny fiara tsy haka olona afa-tsy izay mandeha akaiky (hatreo Ananona ihany no farany an!)
Niasa mafy ihany koa ilay polisy mba hita teo Tsaramasay manoloana ny sekoly ambonin'ny Finoana Shiita Islamo fa nasiany avokoa izay fiara fitaterana nitondra olona mitsangana rehetra. Miteny hoe "Bonne Année an!" ka tsy hay marina hoe miarahaba nahatratra ny taona ve izy sa mangataka fanomezana? raha ny fihainoana azy tahaka ny mirona kokoa any amin'ilay faharoa ny fihainon'ny mpandeha azy saingy efa fantatry ny fiara moa ny fisiany ka mailo hatrany izy ireo mampipetraka ny olona entiny. Tsy mahavaha ny olana amin'ireo olona marobe tavela manerana ny fiantsonana rehetra anefa ny fahavitsian'ny fiara miasa.
Ilaina dia ilaina ny rano rehefa hikarakara fety
Ary indraindray mampieritreritra ny hoe ny matsaka ve no mora kokoa sa ny mampiditra rano ao an-trano? ireo siny miloko mavo maromaro mitambatra aty aoriana ireo dia feno rano avokoa ary olona iray no naka azy.
Mampiaiky ny fitiavan'ny olona mivoaka hilanona kely toy ny etsy Analakely ohatra. Mifety dia mifaly fa rehefa vita izany dia mifampitady amin'ny fiara fitaterana hodiana. Misisika miaraka amin'ny zaza mbola trotroina. Mifety tokoa aloha fa rehefa avy eo mifampitady amin'ny hanina rahampitso sy ny rahafakampitso...
Na izany na tsy izany, mirary soa anareo rehetra indray.
Andavanandro Mialoha Fety [Sary]
2011-12-13 @ 23:17 in Andavanandro
Hono ho'aho e! tena ilaina ve ny iasan'ny mpitatitra fako amin'ny atoandro miaraka amin'ilay fofona mampihoaka iny?
Hitantsika fa mampiasa traktera mihitsy ny Kaominina hampiakarana ny fako saingy izao: Tsy matetika hitsantsika ve ny fako no atao lafiky ny entana izay matetika ilay ampidirina am-bava tahaka ny hita eto Andravoahangy? Efa tsy mahatsapa ny haratsian'ny loto intsony ve ny mponina?
Talata maraina mialoha ny amin'ny fito ora: mbola indreo eny an'arabe ny entana amidy
Izay matetika Sakafo no mihosina eny amin'ny tany, amin'izato plastika izay mety ho efa nivadibadika manitsaka tany no mikasika mivantana amin'ny sakafo indray
Ary rehefa misy fiara mijanona eo amorony na anaty arabe dia miditra anatiny kokoa ny mpivarotra ka tery avy hatrany ny lalana. Ny sary rehetra dia nalaina tamin'ny finday tsotra dobla parasy haha
«Mialoha 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 25 26 27 Manaraka»